Kulamo usocday Villa Somaliya iyo Dowlad Goboleedyada oo istaagay. - Tilmaan Media
Wararka lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kulamo dhanka onlineka ah oo u dhaxeeyay wakiillo ka socda Villa Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada uu ku soo dhamaaday fashil kadib markii la isku af garan waayay in madaxwaynaha jamhuuriyaddu lakulmo madaxda dowlad goboleedyada.
Shirkaan ayaa waxaa kaqayb qaadanayay wakiillo matalayay shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. wuxuuna fashilmay kadib markii Villa Soomaaliya ay ka cagojiiday in madaxdu kulmaan kahor inta aysan baarlamaanka hortagin gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliimo Yareey.
Kulamadaan ayaa kadhashay cadaadis beesha caalamku saartay madaxda Soomalida in ay kawada hadlaan arrimaha doorashooyinka dalka. lkn waxaa muuqata in dowladda federaalku aysan doonayn in ay maamul goboleedyada kaqayb galiso shaqada doorashooyinka.
dhawr maalmood kahor ayay ahayd markii xukuumaddu federaalku sheegtay in ay bilaabanayaan wadatashiyada lagala yeelanayo dowlad goboleedyada arrimaha doorashooyinka.
Sikastaba, dadka qaybtood ayaa rumaysan in mid kamid ah caqabadaha hortaagan wada hadallo dhex mara madaxwaynaha dowladda federaalka iyo madaxda dowlada goboleedyada ay tahay, ismari waaga ka taagan dowlad goboleedka jupaland oo madaxwayne farmaajo uusan doonayn in ay kulmaan madaxwaynaheeda Ahmed Madoobe.
Wadahadal la,aanta ayaa saamayn aan wanaagsanayn ku yeelanaysa habsami usocodka doorashooyinka lafilayo in ay dalka ka dhacaaan.